Nabani na uyazi mela Weather ezilungileyo P3D?
umbuzo Nabani na uyazi mela Weather ezilungileyo P3D?
iminyaka 2 ngenyanga 1 ago #17 by andhar
Nabani na uyazi ukuba yintoni na mela imozulu elungileyo Prepar3D ??
iminyaka 2 3 kwiiveki ezidlulileyo #82 by Gh0stRider203
Ndinazo P3D, kodwa kubonakala indlela yam ndiyayithanda .....
Enye into Ndiye ndafumanisa okulungileyo ngokwenene, yaye exabisa isenti nganye, na Rex.
Nangona andizange Ndiye bakusebenzise, ​​ndivile izinto ezilungileyo FSRealWX. (Kwaye oko ikhululekile, kakade mna ndiyinyuse)
Bobabini P3D ehambelanayo
Ndiyathemba oku kuyanceda!
iinyanga 1 kunyaka 10 eyadlulayo #509 by Flyas1
FSrealWX isebenza kakuhle.
Ixesha ukwenza page: 0.210 imizuzwana